Dagaalka Maamulka Yahuuda iyo Dowladda Iran ee Dhinaca Bada | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dagaalka Maamulka Yahuuda iyo Dowladda Iran ee Dhinaca Bada
Qarax ayaa burburiyay Markab ay leedahay Iraan oo marayay xeebaha Badda Cas ee dalka Yemen, Sidaa waxaa xaqiijisay Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Iran.
Markabka wuxuu ahaa mid “looga hakiyay in ciidamada Kacaanka Iiraan ay u adeegsadaan howlo basaasnimo ah.”
Qarax ayaa Talaadadii lala beesgaday markabka Saviz, wax khasaare ah na kama dhalanin, waxaana weli socda baaritaanno ku aadan dhacdadaas, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda Iran.
Wuxuu hadalkiisa sii raaciyay: “Markabka rayidka ah wuxuu saldhiggiisu ahaa halkaas si uu uga hortaggo howlaha burcad badeedda”.
Wargeyska New York Times ayaa ku warramay in Israa’iil ay Mareykanka u sheegtay in ay weerar ku qaaday markabka Saviz.
Saraakiisha Israa’iil kama aysan hadlin dhacdadan, balse Israa’iil iyo Iran wuxuu midba midka kale ku eedeeyay in uu weeraray maraakiib ay leeyihiin.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran, Saciid Khatibzadeh wuxuu sheegay in qaraxa lala beegsaday markabka Saviz, subixiiTalaadada, isla markaana khasaare aan sidaa u badneyn uu soo gaaray markabka.
“Baaritaanno dhanka farsamada ah ee ku saabsan dhacdada ayaa weli socdaan. Dalkeena wuxuu qaadi doonaa tallaabo kasta oo laga maarmaan ah oo ku saabsan arrintan, iyadoo loo marayo ha’yado caalami ah”.
Khatibzadeh wuxuu ka dhawaajiyay in markabka aanu aheyn mid militari balse wuxuu xaqiijinayay in uu yahay mid amniga maraakiibta mara xeebaha Badda Cas ka shaqeeya iyo inay ka hortaggaan burcad badeedda.
Wakaaladda wararka ee ka soo baxda Iran ee Tasnim oo soo xiganeysay ilo wareedyo aanan la magac dhabin ayaa ku qortay in qaraxa uu ahaa mid ka dhashay miino lagu rakibay qeyb ka mid ah markabka.
Militariga Mareykanka waxay sheegeen in aysan wax lug ah ku laheyn arrintaas.
Saraakiisha Iran, cidna kuma aysan eedeyn qaraxa balse wargeyska New York Times oo soo xiganayo ilo wareedyo Amerikaan ah oo uusan magacaabin, ayaa sheegay in Israa’iil ay Mareykanka ku wargelisay in ciidamadeeda ay weerar ku qaadeen markabka Iran.
Waxay sheegeen in “markabka Saviz la burburiyay isla markaana ay Israa’iil qaaday tallaabo ay uga aargoosaneyso weeraradii ay horraan Iran ku qaaday maraakiib ay leedahay Israa’iil.”
Wasiirka gaashaandhigga Israa’iil, Benny Gantz, ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo dhacdada, balse wuxuu wargeyska Maariv u sheegay: “Waxaan leenahay qalabka difaac ah oo howlgala 24-saac iyo guud ahaan sanadka, waxay diyaar u yihiin in laga howgeliyo deegaan kasta si ay u gaaraan masaafo kasta”.
Isbaheysiga uu hoggaaminayo Sucuudiga ayaa sheegay in markabka Saviz ay saar yihiin doomo dheereeyo oo agab gaarsiiya maleeshiyaadka Xuutiyiinta
Talaadadii, Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, wuxuu xisbiga uu ka tirsan yahay u sheegay in “lasii wadi doono in laga hortaggo daandaansiga ay Iran ka waddo gobolka”.
Netanyahu ayaa Iran ku eedeeyay in ay burburisay Markab ay Israa’iil leedahay kaas oo marayay gacanka Cummaan, 26 bishii Febraayo, eedeymahaas oo ay iska foggeysay Iran.
Warbaahinta Iran ayaa ku warrantay in Israa’iil looga shakiyay in ay ka dambeysay qarax lala beegsaday Markab ay Iran leedahay oo marayay badda Mediterranean-ka, 10-kii bishii March.
25-kii bishii March, Markab xamuul oo ay leedahay Israa’iil ayaa lala beegsaday madfac, xilli uu marayay gacanka Carbeed kaas oo ay saraakiisha Israa’iil uga shakiyeen in ay ka dambeysay Iran.
Markabka Saviz ayaa ka howlgalay xeebaha Koonfureed ee badda cas, tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2016-kii, Isbaheysgiga dagaalka ka wado Yemen ee Sucuudiga uu hoggaaminayo, ayaa 2018-kii ku eedeeyay in markabka Saviz ay leeyihiin militariga Iran, kaas oo basaasayo maraakiibta kale ee maraya xeebaha.
Previous articleMusharax Xasan Cali Kheyre oo ka Tacsiyeey Geerida Jen Ceynta oo wax yar ka hor Geeriyooday
Next articleSarkaal sare oo u dhashay Ruush ah oo ka digay in Moscow ay soo faragalin karto si ay u caawiso dadka ku hadla afka Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine
Waxaa goordhaw Xaafada Sarkuusta ee magaalada Muqdisho lagu dilay Gudoomiyihii degmada Xamar Jajab ee Gobolka Banaadir Maxamed Cabdi Axmed sida ay noo xaqiijiyeen ilo...